सावधान! कम्मरको दुखाई वेवास्ता गर्दा मृत्यु सम्म हुन सक्छ – Etajakhabar
सावधान! कम्मरको दुखाई वेवास्ता गर्दा मृत्यु सम्म हुन सक्छ
ताजा खबर :- के तपाई पनि कम्मर दुख्ने समस्यामा हुनुहुन्छ? दुनिया भरिमा ७०० मिलियन भन्दा धेरै मानिस ब्याक पेनको समस्यामा छन्। शोधकर्ताले चेतावनी दिएका छन्। कि ब्याक पेनका कारण १३ प्रतिशत मानिस चाँडै मृत्युको खतरामा हुन्छन्।
जून मानिसहरू स्पाइनल पेन(कम्मर र घाँटी) ले ग्रसित छन् उनीहरुमा १३ प्रतिशत अधिकको चाँडै मृत्यू हुने सम्भवना हुन्छ। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी यूनिभर्सिटीका प्रमुख शोधकर्ता मैथ्यू फर्नाडीज भन्छन, ब्याक पेन यस्तो समस्या हो जो अधिक मानिसलाई लामो समय सम्म उदास बनाउनु को साथै उनीहरुको लाइफलाई पनि इफेक्ट गर्छ।
सिडनी यूनिभर्सिटीको असिस्टेन्ट प्रोफेसर पाओलो फेरेरिया भन्छन, कि धेरै मानिसका अनुसार ब्याक पेन द्वारा कुनै पनि किसिमको मृत्यूको खतरा हुँदैन। लगभग ८४ प्रतिशत मानिसको ब्याक पेन लाइफ टाइम दुःख दिने र ओल्डर ऐजमा अझैँ धेरै हुन्छ।
कम्मरको दुखाई र मृत्यू दरको लिंक:-
तीव्र गतिमा बढीरहेको एजिंग पपुलेशनमा आज स्पाइनल प्रोब्लमको एक ठूलो समस्या बन्दै छ। तर यस्तो मानिएको छ कि स्पाइनल प्रोब्लम खराब हेल्थको परिणाम हो जस द्वारा शरीरको फंक्शन्स पनि ठीक सँग काम गर्न सक्दैन। यसकारण ओल्डर पपुलेशनमा मृत्यू दर समय भन्दा पहिले बढीरहेको छ।
यूरोपियन जर्नल अफ पेनमा पब्लिश इस रिसर्चमा ७० साल सम्मका ४३९० मानिसलाई समावेश गरिएको थियो।
कम्मर दुखाईको उपचार:-
कम्मर दुखाईको लागि प्यारासिटामोल र एन्टी इंफ्लेमेट्री ड्रग्स देखि लिएर सर्जरी सम्म कुनै पनि ट्रीटमेन्ट पूरै तरिकाले सक्सेसफुल छैन तर यसको साइड इफेक्ट्स धेरै छन्। ब्याक पेनको सबैभन्दा राम्रो ट्रीटमेन्ट हेल्दी लाइफस्टाइल हो। यहाँ सम्म कि फिजिकल एक्टीभीटीलाई दैनिक जीवनमा समावेश गर्नु पनि एक उपचार हो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ०५, २०७४ समय: २३:३९:१२